လီဗာပူး ကစားသမားတဈဦးရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ဘာစီလိုနာ မှာ မကျဆီရဲ့ အရေးပါပုံနဲ့ ခိုငျးနှိုငျးလိုကျတဲ့ မကျအာတီးယား - SPORTS MYANMAR
လီဗာပူး ကစားသမားတဈဦးရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ဘာစီလိုနာ မှာ မကျဆီရဲ့ အရေးပါပုံနဲ့ ခိုငျးနှိုငျးလိုကျတဲ့ မကျအာတီးယား
ရျောဘတျတို ဖာမီနို ဟာ ဘလှနျးဒီအော ငါးဆုရှငျ လီယှနျနယျမကျဆီ ဘာစီလိုနာ အတှကျ အရေးပါသလိုမြိုး လီဗာပူး အတှကျ အရေးပါတဲ့သူ ဖွဈတယျလို့ ဂဆြှေနျ မကျအာတီးယား က ဆိုလိုကျပါတယျ။ ဖာမီနိုဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အနျဖီးကို ဂြာမနျ ကလပျ ဟော့ဖနျဟိုငျး အသငျး ကနေ ရောကျလာ ခဲ့သူ ဖွဈပွီး လီဗာပူး အတှကျ လကျရှိ အခြိနျမှာ ပှဲပေါငျး ၂၀၀ ကြျော ကစား ပေးထား ခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၂၈ နှဈ အရှယျ တိုကျစဈမှုးဟာ လီဗာပူး မှာ သှငျးဂိုး ၆၈ ဂိုးသာ သှငျးယူ ထားနိုငျ ခဲ့ပမေယျ့လညျး ၎င်းငျးရဲ့ ကှငျးအတှငျး လုပျအားနှုနျးဟာ အသငျး အတှကျ ကွီးကွီးမားမား အရေး ပါနတေယျ။ ဖာမီနို ဟာ မိုဟာမကျဆာလား ၊ ဆာဒီယို မာနေး တို့နဲ့ အတူ ဥရောပ ရဲ့ အကောငျးဆုံး တိုကျစဈ အတှကျကို ပုံဖျော ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး လီဗာပူး အတှကျ အထောငျ တိုကျစဈမှာ ကစား ရတာ ဖွဈပမေယျ့လညျး ဘရာဇီး စတားဟာ ရှကေ့နေ ခံစဈကို ကူပေးတဲ့ အပွငျ နောကျထိ ဆငျးကာ ခြိတျဆကျ ကစားပွီး တှဲဖကျ တိုကျစဈ ကစားသမား နှဈဦး အတှကျ ဖနျတီးမှုတှေ လုပျပေး နတော ဖွဈပါတယျ။
ဖာမီနို ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ၈ ပှဲအပွီးမှာ ၃ ဂိုး သှငျးကာ ၃ ဂိုး ဖနျတီး ထားနိုငျခဲ့ပွီး ပရိတျသတျတှေ ဘောလုံး ကြှမျးကငျြသူတှရေဲ့ ခြီးကြူးမှုတှေ အမြားအပွား ရနပေါတယျ။ လီဗာပူး အတှကျ ၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၉ ထိ ကစား ပေးခဲ့တဲ့ မကျအာတီးယား ကတော့ ဖာမီနို ရဲ့ လှမျးမိုးနိုငျမှု အပျေါ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ မကျဆီ နဲ့ ခိုငျးနှိုငျး သှားခဲ့ပွီး အာဂငျြတီးနား စတားဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှဈ ကြျောမှာ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး အဖွဈ လူတျောတျော မြားမြားရဲ့ သတျမှတျ ထားခွငျး ခံရသူ ဖွဈပါတယျ။
မကျအာတီးယား က “လီဗာပူးမှာ ဂန်တဝငျ နံပါတျ ၉ တှေ ပိုငျဆျိုငျ ခဲ့ပွီး ရျောဘတျတို ဖာမီနို ကလညျး ဒီအတနျးအစားမှာ ၀ငျပါတယျ။ ဘရနျဒနျရျောဂြာ ဟာ သူ အသငျးမှာ ရှိနတေုနျးက ဖာမီနိုကို ဘယျနရောမှာ သုံးရမလဲ ဆိုတာ မသိခဲ့ဘဲ ဘယျတောငျပံမှာ ထားကစား ခဲ့ပါတယျ။ ကလော့ ၀ငျလာခြိနျမှာတော့ သူဟာ ၄-၃-၃ ကစားကှကျ နဲ့ အတူ ပွငျးထနျတဲ့ ကှငျးလယျလုပျအားနဲ့ ပေါကျကှဲနတေဲ့ front three ကို ပေါငျးစပျ ခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ အနနေဲ့ တိုကျစဈမှာ အရာအားလုံး အံဝငျခှငျကြ ဖွဈသှားဖို့ အတှကျ မှျောဆနျသူ တဈယောကျ လိုအပျ ခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာ အသငျး မှာ မကျဆီကို တညျပွီး ကစား စတောနဲ့ ဆငျတူပါတယျ။ ဖာမီနိုဟာ လီဗာပူးရဲ့ မကျဆီ ပါပဲ။ သူ အသငျးအတှကျ ၀ငျမကစား နိုငျတဲ့ အခါ အသငျးဟာ ကစားအား ဘယျလောကျ ကသြှားမလဲ ဆိုတာ ခငျဗြားတို့ မွငျနိုငျ ပါတယျ။
သူဟာ ယူအီးအကျဖျအေ စူပါဖလား ရဲ့ ပထမပိုငျးမှာ ၀ငျမကစား ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျး သူဝငျလာ ခြိနျမှာတော့ သူဟာ ခကျြခငျြး ဆိုသလို သကျရောကျမှု ပေးစှမျး ခဲ့ပွီး အခှငျ့အရေး အမြားအပွား ဖနျတီး ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒီနညျးစနဈဟာ မိုဆာလား နဲ့ မာနေး တို့အတှကျ အံဝငျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လုပျအား အပွငျးဆုံး ထုတျရတာ ကတော့ ဖာမီနို ပါပဲ။ သူမပါတဲ့ အခါ လီဗာပူး ဟာ အခွား အသငျး တဈသငျး ဖွဈသှားပါတယျ။” လို့ ပွောခဲ့ ပါတယျ။
လီဗာပူးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဇနျနဝါရီလ ၃ ရကျနေ့ မနျစီးတီးကို အီတီဟတျမှာ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး လိဂျပွိုငျပှဲမှာ လုံးဝ ရှုံးပှဲ မရှိသေးဘဲ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ၈ ပှဲစလုံး ကိုလညျး အနိုငျ ရထားပါတယျ။ အာဆငျနယျ ရဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ရှုံးပှဲ မရှိ မှတျတမျးကို လိုကျမှီ လိမျ့မယျလို့ လူတဈခြို့က ပွောနေ ကွပမေယျ့လညျး အာတီးယား ကတော့ လာမညျ့ ၂ လ မှာ လီဗာပူး တို့ ကစားရမယျ့ ပှဲကပျြတှဟော အသငျးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို စမျးသပျလိမျ့မယျလို့ ပွောသှား ပါတယျ။
အာတီးယား က “သူတို့ ဒီရာသီ ရှုံးပှဲ မရှိ ကစားနိုငျမှာလား? ကြှနျတျော ဒီအပျေါ ဘာမှ မပွောလိုပါဘူး။ ပှဲတှေ အမြားကွီး ကစားဖို့ ကနျြနသေေးတဲ့ အပွငျ အစောကွီး ရှိနေ ပါသေးတယျ။ အဓိက မေးခှနျး ကတော့ လီဗာပူး တို့ နောကျဆုံး စညျးကို ကြျောဖွတျကာ ဖလား ဆှတျခူးနိုငျမှာလား။ သူတို့ဟာ နိုဝငျဘာ ဒီဇငျဘာမှာ ကွမျးတမျးတဲ့ ၁၅ ပှဲနဲ့ ကာတာကို ကမ်ဘာ့ကလပျမြား ဖလား အတှကျ သှားကစား ရမှာပါ။
သူတို့ရဲ့ လူစာရငျးဟာ ဒီအခြိနျမှာ စတငျ လှုပျလာပါပွီ။ ကလော့ အနနေဲ့ အလှညျ့ကြ သူသုံးစှဲရမယျ့ အခြိနျ နဲ့ သူ့ရဲ့ အရနျ ကစားသမားတှကေို စတငျ အသုံးပွု သှားရမယျ့ အခြိနျ ရောကျလာ ပါပွီ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
လီဗာပူး ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ဘာစီလိုနာ မှာ မက်ဆီရဲ့ အရေးပါပုံနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တဲ့ မက်အာတီးယား
ရော်ဘတ်တို ဖာမီနို ဟာ ဘလွန်းဒီအော ငါးဆုရှင် လီယွန်နယ်မက်ဆီ ဘာစီလိုနာ အတွက် အရေးပါသလိုမျိုး လီဗာပူး အတွက် အရေးပါတဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဂျေဆွန် မက်အာတီးယား က ဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဖာမီနိုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အန်ဖီးကို ဂျာမန် ကလပ် ဟော့ဖန်ဟိုင်း အသင်း ကနေ ရောက်လာ ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး လီဗာပူး အတွက် လက်ရှိ အချိန်မှာ ပွဲပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကစား ပေးထား ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ် တိုက်စစ်မှုးဟာ လီဗာပူး မှာ သွင်းဂိုး ၆၈ ဂိုးသာ သွင်းယူ ထားနိုင် ခဲ့ပေမယ့်လည်း ၎င်းရဲ့ ကွင်းအတွင်း လုပ်အားနှုန်းဟာ အသင်း အတွက် ကြီးကြီးမားမား အရေး ပါနေတယ်။ ဖာမီနို ဟာ မိုဟာမက်ဆာလား ၊ ဆာဒီယို မာနေး တို့နဲ့ အတူ ဥရောပ ရဲ့ အကောင်းဆုံး တိုက်စစ် အတွက်ကို ပုံဖော် ထားနိုင် ခဲ့ပြီး လီဗာပူး အတွက် အထောင် တိုက်စစ်မှာ ကစား ရတာ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘရာဇီး စတားဟာ ရှေ့ကနေ ခံစစ်ကို ကူပေးတဲ့ အပြင် နောက်ထိ ဆင်းကာ ချိတ်ဆက် ကစားပြီး တွဲဖက် တိုက်စစ် ကစားသမား နှစ်ဦး အတွက် ဖန်တီးမှုတွေ လုပ်ပေး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖာမီနို ဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲအပြီးမှာ ၃ ဂိုး သွင်းကာ ၃ ဂိုး ဖန်တီး ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်တွေ ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ချီးကျူးမှုတွေ အများအပြား ရနေပါတယ်။ လီဗာပူး အတွက် ၁၉၉၅ မှ ၁၉၉၉ ထိ ကစား ပေးခဲ့တဲ့ မက်အာတီးယား ကတော့ ဖာမီနို ရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်မှု အပေါ် ဘာစီလိုနာ ရဲ့ မက်ဆီ နဲ့ ခိုင်းနှိုင်း သွားခဲ့ပြီး အာဂျင်တီးနား စတားဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ် ကျော်မှာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အဖြစ် လူတော်တော် များများရဲ့ သတ်မှတ် ထားခြင်း ခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
မက်အာတီးယား က “လီဗာပူးမှာ ဂန္တ၀င် နံပါတ် ၉ တွေ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပြီး ရော်ဘတ်တို ဖာမီနို ကလည်း ဒီအတန်းအစားမှာ ၀င်ပါတယ်။ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာ ဟာ သူ အသင်းမှာ ရှိနေတုန်းက ဖာမီနိုကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးရမလဲ ဆိုတာ မသိခဲ့ဘဲ ဘယ်တောင်ပံမှာ ထားကစား ခဲ့ပါတယ်။ ကလော့ ၀င်လာချိန်မှာတော့ သူဟာ ၄-၃-၃ ကစားကွက် နဲ့ အတူ ပြင်းထန်တဲ့ ကွင်းလယ်လုပ်အားနဲ့ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ front three ကို ပေါင်းစပ် ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ အနေနဲ့ တိုက်စစ်မှာ အရာအားလုံး အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်သွားဖို့ အတွက် မှော်ဆန်သူ တစ်ယောက် လိုအပ် ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ အသင်း မှာ မက်ဆီကို တည်ပြီး ကစား စေတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ ဖာမီနိုဟာ လီဗာပူးရဲ့ မက်ဆီ ပါပဲ။ သူ အသင်းအတွက် ၀င်မကစား နိုင်တဲ့ အခါ အသင်းဟာ ကစားအား ဘယ်လောက် ကျသွားမလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ မြင်နိုင် ပါတယ်။
သူဟာ ယူအီးအက်ဖ်အေ စူပါဖလား ရဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ၀င်မကစား ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယပိုင်း သူဝင်လာ ချိန်မှာတော့ သူဟာ ချက်ချင်း ဆိုသလို သက်ရောက်မှု ပေးစွမ်း ခဲ့ပြီး အခွင့်အရေး အများအပြား ဖန်တီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်ဟာ မိုဆာလား နဲ့ မာနေး တို့အတွက် အံဝင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်အား အပြင်းဆုံး ထုတ်ရတာ ကတော့ ဖာမီနို ပါပဲ။ သူမပါတဲ့ အခါ လီဗာပူး ဟာ အခြား အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။” လို့ ပြောခဲ့ ပါတယ်။
လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့ မန်စီးတီးကို အီတီဟတ်မှာ ရှုံးနိမ့် ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ လုံးဝ ရှုံးပွဲ မရှိသေးဘဲ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ၈ ပွဲစလုံး ကိုလည်း အနိုင် ရထားပါတယ်။ အာဆင်နယ် ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ရှုံးပွဲ မရှိ မှတ်တမ်းကို လိုက်မှီ လိမ့်မယ်လို့ လူတစ်ချို့က ပြောနေ ကြပေမယ့်လည်း အာတီးယား ကတော့ လာမည့် ၂ လ မှာ လီဗာပူး တို့ ကစားရမယ့် ပွဲကျပ်တွေဟာ အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စမ်းသပ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
အာတီးယား က “သူတို့ ဒီရာသီ ရှုံးပွဲ မရှိ ကစားနိုင်မှာလား? ကျွန်တော် ဒီအပေါ် ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ပွဲတွေ အများကြီး ကစားဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ အပြင် အစောကြီး ရှိနေ ပါသေးတယ်။ အဓိက မေးခွန်း ကတော့ လီဗာပူး တို့ နောက်ဆုံး စည်းကို ကျော်ဖြတ်ကာ ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်မှာလား။ သူတို့ဟာ နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ၁၅ ပွဲနဲ့ ကာတာကို ကမ္ဘာ့ကလပ်များ ဖလား အတွက် သွားကစား ရမှာပါ။
သူတို့ရဲ့ လူစာရင်းဟာ ဒီအချိန်မှာ စတင် လှုပ်လာပါပြီ။ ကလော့ အနေနဲ့ အလှည့်ကျ သူသုံးစွဲရမယ့် အချိန် နဲ့ သူ့ရဲ့ အရန် ကစားသမားတွေကို စတင် အသုံးပြု သွားရမယ့် အချိန်ေ၇ာက်လာ ပါပြီ။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။